တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နွေဦးနှင်း နဲ့ စနိုးလေဒီ
ဧပြီ၊ ၆၊ ၂၀၀၈
မနက်အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း ပြတင်းပေါက်ကနေ အိမ်ပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၀န်းကျင်တခွင်လုံး နှင်းတွေဖုံးပြီး ဖြူဖွေးနေတာ မြင်လိုက်ရတယ်။ ညက မိုးလေ၀သ သတင်းမှာတော့ ကြေညာသွားသား၊ နှင်းတွေကျမယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ နွေဦးမှာ ကျတဲ့နှင်းကို ဒီလောက် ထူထပ် သိပ်သည်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိဘူး။ သစ်ပင် သစ်ကိုင်းတွေ ထက်မှာ၊ မြက်ခင်းပေါ်မှာ၊ ပန်းရုံတွေပေါ်မှာ နှင်းတွေ ... နှင်းတွေ ... ဖွေးဖွေးလှုပ်လို့။ ရင်ထဲ လှိုက်ခနဲတော့ ပျော်သွားမိပါရဲ့။ နှင်းနဲ့ဆုံတာ ဒါ ပထမဆုံး မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီလောက်များတဲ့ နှင်းကိုမြင်ရတာတော့ ဒါဟာ ဦးဆုံးပါပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ ချမ်းချမ်းစီးစီး အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး နှင်းတွေထဲသွားပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။ မြင်ကွင်းချင်း ကွာခြားသွားပုံများ ... တနေ့က ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲမှာ အပင်လေးတွေဟာ နေရောင်အောက်မှာ လန်းဆန်းလှပလို့၊ မြင်ကွင်းကလည်း ကြည်လင်လို့။ အဲဒီနေ့က လန်းဆန်းနေတဲ့ ပန်းပင်ကလေးတွေခမျာမှာတော့ နှင်းတွေပိတ်ဖုံးထားလို့ နာလန်မထူနိုင်အောင် ဖြစ်နေရပြီ။
လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောလို အပြောင်းအလဲ မြန်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ မရတဲ့ထဲမှာ ဒီနိုင်ငံက ရာသီဥတုလည်း တခု အပါအ၀င်လို့ ပြောရင်ရမယ်။ အခုနေသာ၊ အခုမိုးရွာ၊ အခုနှင်းကျ ... ဘယ်လိုမှ ကြိုတင် တွက်ဆလို့ မရပါဘူး။ ဒီက မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းသူတွေလည်း အနီးစပ်ဆုံး မှန်အောင်တော့ ခန့်မှန်းလေ့ရှိကြပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့်တော့ မမှန်နိုင်ဘူးဆိုရမယ်။
နှင်းတွေအရမ်းကျတဲ့အခါ သွားရေးလာရေးတွေခက်ခဲတတ်၊ မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှင်းပွင့်ကလေးတွေကို အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ မကြာခင် နေရောင်လာတဲ့အခါ သူတို့လေးတွေ ပျောက်ကွယ် ငုပ်လျှိုး သွားကြရမှာပဲလေ။
နှင်းတွေကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲ ကြည်နူးမိတာနဲ့ ပြတင်းပေါက် ဘောင်ပေါ် တင်နေတဲ့ နှင်းတွေကို လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး အရုပ်ကလေး လုပ်လိုက်တယ်။ အရုပ်ကလေးက ခပ်သေးသေးဆိုတော့ နှာခေါင်းကို ငရုတ်သီး အနီတောင့်ကလေးတပ်၊ မျက်လုံး ၂-လုံးကိုတော့ ကုလားပဲစေ့လေး တပ်လိုက်တော့ စနိုးလေဒီ အရုပ်ကလေး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မကြာခင်ပဲ စနိုးလေဒီလေး ပျော်ကျသွားတယ်။ နောက်တခါ နှင်းထပ်ကျရင်တော့ သူ့အတွက် စနိုးမန်းကလေး လုပ်ပေးဦးမှ ... ။
၇၊ ဧပြီ၊ ၂၀၀၈
Posted by မေဓာဝီ at 10:35 PM
ဟုတ်တယ်နော်မေ...အပြောင်းအလဲတွေက အံ့သြစရာ။ စနိုးလေဒီလေးက ချစ်စရာလေး။ နောက်တခါဆို ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ပါးစပ်ကလေးတပ်ပေးလိုက်နော်။ နို့မို့ စနိုးမန်းလေးကို communicateမလုပ်နိုင်ဖြစ်နေမယ်။
4/08/2008 2:22 AM
if u make snow man, snow lady will freeze.
coz u make alone.
if u make both. u can..
4/08/2008 5:35 AM
i think i'm wrong typing above comment. because, my friend is disturb when i was typing.
:) sorry for that wrong type.